Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahinta Dagaaladii Ugu Dambeeyey
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahinta Dagaaladii Ugu Dambeeyey
Dagaala aad u culus ayaa labadii todobaad ee lasoo dhaafay ka dhacay meela kala duwan dalka ka mid ah. Warbixinta Xarunta Dhexe ee JWXO ay nasoo gaadhsiiyeen ayay ku sheegeen in dagaalo badan ay CWXO ku qaadeen fadhiisimaha ay ciidamada cadawgu ku leeyihiin wadanka Ogadenia. Dagaalan oo isugu jira kuwa aan wali lasoo faahfaahinin ayaa kuwa faahfaahintooda la helay cadawga khasaare laxaadleh uu kasoo gaadhey. Tirakoobka aan helnay ayaa ah sidan; bakhtiga cadawga waa 51 askari oo darajooyin kala duwan lahaa, halka dhaawaca intaa uu ka badan yahay. Waxaa kaloo jira laba gawaadhida ciidanka qaada oo miino loo dhigay oo halkii ku basbeelay iyadoo askartii saarnayd ay noqdeen qaar ku bakhtiyay goobtii iyo kuwa dhaawac culus noqday. Dagaaladaa ayaa waxay udhaceeen sidan;
3/9/14 Laanjaleelo oo katirsan dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo dagaal cwxo iyo guwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 9 askari 13 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/9/14 Abqaale oo dagmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/9/14 Carojiif oo Danood katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aan lasoo faahfaahinin.
6/9/14 Garloogube oo Gobolka Doollo katirsan dagaal CWXO iyo kuwa cadawga kudhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
7/9/14 Geedi’aar oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 6 askari 9 kana waa lagaga dhaawacay.
8/9/14 Qararo oo dagmada Gunagado ee Gobolka Jarar katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/9/14 Miirta oo dagmada Gunagado katirsan weerar aad uxoogan oo ay CWXO ku qaadeen ciidamada gumaysiga ee halkaas fadhiisinka kuleh waxay ku gaadhsiiyeen jab aan laqiyaasi karin waxayna ciidankii cadawga ee halkaas lagu helay ukala firxadeen Dig, Gunagado iyo Balisareedo waxaana dhiman faahfaahinta dagaalkaas oo aad uxoogbadnaa. Dagaalkan oo khasaaraha cadawga soogaadhay dib laga ogaaday ayaa waxaa ku bakhtiyay 15 askari inta la hubsaday iyo dhaawac aan wali lahelin tiradooda.
12/9/14 Gudaha dagmada Shilaabo ee Gobolka Qoraxay weerar culus oo ay CWXO kuqaadeen ciidanka gumaysiga ee halkaas kusugan waxay gaga dileen inta lahubsaday 3 askari 4 kalana way kudhaawaceen.
12/9/14 Dulqorax oo dagmada Shaygoosh ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal ku dhexmaray ciidanka wayaanaha iyo ciidanka xooga dalka Ogadenia waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
13/9/14 Danood oo Gobolka Doollo katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay ku gubeen 1 baabuur oo uuraal ah waxaana halkaas ku basbeelay baabuurkii iyo wixiisaaraaba.
13/9/14 Laaso’oomane oo Dagmada Shilaabo katirsan dagaal aad uculus oo cwxo iyo kuwa cadawga kudhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 12 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/9/14 Uubataale oo dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo ka tirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay kugubeen 1 baabuur oo kuwa ay ciidanka cadawgu qaataan ah waxaana isla basbeelay isaga iyo wixii saaraaba.
15/9/14 Dayr oo dagmada Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.